wintuntun၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleMandalay.PatheinGyiMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ wintuntun's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
wintuntun shared wai mon's blog post on Facebookသင်သေသွားသော်Oct 10, 2012wintuntun liked wai mon's blog post 'မိမွေ ဖမွေ ထိန်းစို့လေ'Oct 10, 2012wintuntun shared ကောင်းမြတ်မင်း's blog post on Facebookကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ လမ်းညွန်Aug 6, 2012လှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for wintuntun"မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။မိမိမေလ်းထဲမှ…"Aug 6, 2012wintuntun ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Aug 6, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
5:49pm အချိန်August 6, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။မိမိမေလ်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်ကိုကလစ်၍ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာနဗုဒ္ဓဘာသာစာကြည့်တိုက်၊ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားများအဖွဲ့၊ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိူးသမီးများအဖွဲ့၊မေတ္တာပို့ရန်နေရာနှင့် (ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာပရဟိတအဖွဲ့ )တို့ကိုလည်းသွားရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Top News · Everything padout liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြား သိမှတ်ရာ၌ နည်းသုံးဖြာဆိုတာ ဘာလဲ'20 minutes agoမြူနှင်းမှုံ liked Thaung Tan's blog post 'တစ်ရက် နဲ့တစ်ရာ'44 minutes agoမြူနှင်းမှုံ liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဒီနေ့လည်း လွန်ဆွဲဦးမယ်'53 minutes agoမြူနှင်းမှုံ liked thein wai's blog post 'လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ “ ဒုက္ခ (၇) မျိုး ” ။'1 hour agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား1 hour agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ပွားများ မှတ်သားသေးသလား'1 hour agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookသေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး1 hour agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'1 hour agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookနက်နဲထူးဆန်း မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သင်တန်း မှတ်စုများ1 hour agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'နက်နဲထူးဆန်း မြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သင်တန်း မှတ်စုများ'1 hour agoSoe Gyi shared thein wai's blog post on Facebook“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။1 hour agoSoe Gyi liked thein wai's blog post '“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တန်)။'1 hour ago More... RSS